အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ား အသံအနိမ့္အျမင့္ မွန္ကန္တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ - Myanmar Network
အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသူမ်ား အသံအနိမ့္အျမင့္ မွန္ကန္တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
Posted by Myanmar Network Forum Moderator3 on July 17, 2015 at 12:00 in အဂၤလိပ္စာ သိေကာင္းစရာ အျဖာျဖာ
<Zawgyi> အသံအနိမ့္အျမင့္ ဆိုတာဘာလဲ၊ သင့္ရဲ႕ အသံထြက္နဲ႔ အသံေနအသံထား အနိမ့္အျမင့္ကို ဘယ္လိုတိုးတက္ေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ ဘဂၤလားေဒရွ္႕ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ ျဗိတိသွ်ေကာင္စီမွ ဆရာတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဖဇယ္လ္မ်ဴနီယမ္ က အသံအနိမ့္အျမင့္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ အခုလိုပဲရွင္းျပခဲ့ပါတယ္။
သင္ဟာ အငွားကားေမာင္းသူတစ္ေယာက္ကို ၅ကီလိုမီတာ အကြာမွာရွိတဲ့ ေစ်း၀ယ္စင္တာတစ္ခုကို လိုက္ပို႔ေပးႏိုင္မလားလို႔ ေမးေနတယ္လို႔ စိတ္ကူးၾကည့္လိုက္ပါ။ ကားေမာင္းသူကလဲ သင့္ကို စိတ္မပါတဲ့အသံနဲ႔ "ရတယ္။ တက္ပါ " စသည္ျဖင့္ ျပန္ေျပာတယ္ဆိုပါစို႔။ သင္ သူ႕ကားေပၚကို တက္လိုက္သြားမွာပါလား။
တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ပထမကားရဲ႔ ေနာက္မွာ ေနာက္ထပ္ကားတစ္စီး ရွိတယ္ေနၿပီး၊ သင္ကလည္း အလားတူေမးခြန္းမ်ိဳးေမးခဲ့ၿပီး၊ အဲ့ဒီ ကားေမာင္းသူကလည္း သင့္ကို ေတးဂီတ အသံကဲ့သို႔ ေပါ့ပါးသြက္လက္စြာနဲ႔ ျပန္ၿပီးတုန္႕ျပန္ေျပာဆိုတယ္ ဆိုပါစို႔။ သင္ သူ႕ကားနဲ႔ လိုက္သြားမွာပါလား။
သင္ ဒုတိယကားကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္၊ ဒါဟာ ကားေမာင္းသူရဲ႕ တုန္႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္တဲ့ အသံေနအသံထားကို ၾကည့္ၿပီး သင္ေရြးခ်ယ္လိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕အသံက သင့္ကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစၿပီး သင့္ကို ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ သင္ခံစားသြားရလို႔ျဖစ္ပါတယ္။
ကဲဒါျဖင့္ အသံေနအသံထား၊ အသံ အနိမ့္အျမင့္ ဆိုတာ အမွန္က ဘာကိုေျပာခ်င္တာပါလဲ။ ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ပံုစံမ်ိဳး ေျပာဆိုတာလား၊ အဲ့ဒီထက္ပိုေသးလား။
အသံအနိမ့္အျမင့္ကို ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင့္မလဲ
အသံအနိမ့္အျမင့္ဆိုတာ ဘာသာစကားအားလံုရဲ႕ အသံထြက္ပံုထြက္နည္းပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ပံုစံေတြကေတာ့ အသံဖိ (stress)၊ စီး၀ါးညီတဲ့အသံ (rhythm)၊ တဆက္တည္း ထြက္ေသာအသံ (connected speech)၊ အသံထြက္ပံု (accent) တို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အသံေနအသံထား အသံအနိမ့္အျမင့္ဆိုတာဟာ ဘာကိုေျပာမယ္ဆိုတာထက္၊ ဘယ္လိုေျပာမယ္ဆိုတာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။
အရိုးရွင္းဆံုး ေျပာရမယ္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ အသံအနိမ့္အျမင့္ ဆိုတာဟာ "သံစဥ္က်တဲ့စကားသံ"လို႔ ေျပာလို႔ေတာင္ရပါတယ္။ အဲဒီစကားသံေတြမွာ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ သံစဥ္ေတြဟာ ကြန္မတို႔ ဘယ္လိုအဓိပၸါယ္နဲ႔ ေျပာတယ္ဆိုတဲ့ အေပၚကို သက္ေရာက္မႈရွိပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အသံအနိမ့္အျမင့္ဟာ ကၽြန္မတို႕ေျပာခ်င္ေနတဲ့ စကားလံုးေတြရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကို ေဖာ္ျပေနတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္အသံထြက္ အနိမ့္အျမင့္ရဲ႕ မတူညီေသာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား
အသံအနိမ့္အျမင့္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လို အသံုးျပဳရမယ္၊ ဘယ္လို လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး သီအိုရီအခ်ိဳ႕ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက အခ်က္ႏွစ္ခုကို ရွာေဖြေလ့လာ ၾကည့္ၾကရေအာင္။
ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ ဘာသာစကားေတြ၊ အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာဆိုရင္ နားေထာင္သူက စကားေျပာေနသူရဲ႕ စိတ္ေနသေဘာထားကို ခန္႔မွန္းႏိုင္ဖို႔ လြယ္ကူေစပါတယ္။ ၿငီးေငြ႕ေနတာလား၊ စိတ္၀င္စား တာလား၊ အံံ့အားသင့္ေနတာလား၊ ေဒါသထြက္ေနတာလား၊ ေက်းဇူးတင္ေနတာလား၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာလား စတာေတြကို အသံအနိမ့္အျမင့္ကေန တဆင့္အလြယ္တကူ သိႏိုင္ပါတယ္။
ဥပမာအေနနဲ႔ စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခုမွာ စားပြဲထိုးက သင့္ကို "ေခ်ာကလက္မုန္႔ကို ႀကိဳက္ပါသလား" ဆိုၿပီးေမးတဲ့ အခ်ိန္မွာ သင္က "အင္း"လို႕ျပန္ေျဖလိုက္တဲ့ အသံက အလယ္ေလာက္မွာ ျမင့္တက္သြားၿပီး အဆံုးသတ္မွာ အသံကက်သြားမယ္ ဆိုလွ်င္ စားပြဲထိုးေလးက သင့္ကို ၿပံဳးျပေခါင္းညိတ္ၿပီး "ဘာေၾကာင့္ပါလဲ ခင္ဗ်ာ" ဆိုၿပီး ျပန္ေမးပါလိမ့္မယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင္က အလြန္နားေထာင္ေကာင္းတဲ့ သံစဥ္က်တဲ့ စကားသံနဲ႔ သင့္ရဲ႕ႏွစ္သက္မႈကို ေဖာ္ျပလိုက္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ေနာက္ထပ္ ဥပမာ အေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ရဲ႕အလုပ္ထဲမွာ သင္မထင္မွတ္ပဲ ေမြးေန႔ကိတ္ကို လက္ခံရရွိမယ္ဆိုပါေတာ့။ "Did you get that for me?" ဆိုၿပီး သင္ျပန္ေျပာတဲ့အခါမွာ "me" ဆိုတဲ႔ေနရာမွာ သင့္ရဲ႕ အသံကို ျမွင့္ၿပီး ေျပာရပါတယ္။ အဲ့ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ အံ့ၾသ၀မ္းသာမႈကို ေဖာ္ျပေပးရာလဲ ေရာက္ပါတယ္။
စိတ္ပ်က္ညည္းေငြ႔လာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ အသံခပ္နိမ့္နိမ့္နဲ႔ တုန္႔ျပန္ေျပာဆို ရပါတယ္။ သင့္ဆီကို အခြန္ေဆာင္ရမယ့္ စာရြက္လာပို႔တဲ့ စာပို႔သမားကို "ေက်းဇူးတင္ပါတယ္" လို႔ ျပန္ေျပာတဲ့ အသံနဲ႔ သင့္ကား လမ္းေဘးတစ္ေနရာမွာ ကားဘီးေပါက္သြားခ်ိန္မွာ လာကူညီေပးတဲ့လူကို ေျပာလိုက္တဲ့ "ေက်းဇူးတင္ပါတယ္"ဆိုတဲ့ စကားသံႏွစ္ခု ကိုႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ကၽြန္မတို႕ဟာ ေက်းဇူးတင္ စကားနဲ႔ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပခ်င္တဲ့အခါမ်ိဳးေတြမွာ စကားလံုးေတြကို တိတိက်က်နဲ႔ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲရွိတဲ့ အသံအေနအထားေတြနဲ႔ ေဖာ္ျပေလ့ရွိပါတယ္။
စကားေျပာဆိုရာမွာ အသံေနအသံထားမွန္ကန္ဖို႔ အတြက္ သဒၵါအသံုးျပဳမႈကလည္း မွန္ကန္ေနဖို႔လိုပါတယ္။ ဥပမာအေနနဲ႔ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ "Wh" နဲ႔စတဲ့ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲ့အခါမွာ အက်သံေတြနဲ႔ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။
သင္႔ရဲ႕ အတန္းေဖာ္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္နဲ႔ မိတ္ဖြဲ႔ စကားေတြေျပာတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ "What's your name?" "Where are you from?" "Why did you choose this school?" "How long will you stay in here?" စတဲ့ေမးခြန္းေတြ ေမးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အသံေနအသံထားဟာ အက်သံဖက္ကို ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ဟုတ္တယ္။ မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့ အေျဖေလာက္ပဲ လိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳး ေမးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ အသံဟာ အျမင့္သံဖက္ကို ေရာက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ေစာေစာက သူငယ္ခ်င္းအသစ္နဲ႔ မိတ္ဆက္တဲ့ စကားေျပာဆိုျခင္း မွာပဲ "Have you studied here before?" "Do you like the teacher?" "Will you come back tomorrow?" စတဲ့ ဟုတ္လား၊ မဟုတ္ဘူးလား၊ ဆိုတဲ့ ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကို ေမးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ သင့္ရဲ႔ အသံဟာ အဆံုးသတ္ေနရာေတြမွာ ျမင့္တက္သြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အသံအနိမ့္အျမင့္ မွန္ကန္ေစမည့္ နည္းစနစ္မ်ား
သင့္အသံ အနိမ့္ အျမင့္မွန္ကန္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္ဖို႕ဆိုတာက အသံအနိမ့္ အျမင့္နဲ့ ဆိုင္တာေတြကို ပိုသိေအာင္ လုပ္ဖို႔လိုပါတယ္။ အသံသြင္းထားတဲ့ စကားေျပာဆိုပံုေတြကို ေသခ်ာနားေထာင္ သင့္ပါတယ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ YouTube လိုေနရာမ်ိဳးကေတာ့ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။ ဒီလို နားေထာင္ေပးျခင္းျဖင့္ တျခားသူေတြရဲ႕ စကားေျပာဆိုပံု အသံ အနိမ့္အျမင့္ကို သင္ေကာင္းေကာင္း သိလာမွာပါ။
ေနာက္ထပ္ အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ သင့္စကားသံကို သင္ကိုယ္တိုင္ျပန္နားေထာင္လို႔ရေအာင္ အသံသြင္းထားဖို႔ပါပဲ။ ဒီေန႔ကာလေတြမွာ သာမန္စမတ္ဖုန္းေတြမွာေတာင္ အသံသြင္းလို႔ရတဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ ပါေနပါၿပီ။ အဲဒီလိုလုပ္တာဟာ ကိုယ္ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ မတူတာေတြကို ေတြ႔ရမွာမို႔ တကယ့္ကို စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ လုပ္ႏိုင္တာကေတာ့ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းေတြထဲက စကားလံုးေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ စာအုပ္ေတြထဲက စကားလံုးေတြကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ အျပန္အလွန္ေျပာတာကို အသံသြင္းထားဖို႔ပါပဲ။ ကိုယ္ေျပာခဲ့တဲ့ စကားေတြကို ျပန္နားေထာင္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ကိုယ့္စကားသံေတြက သဘာ၀က်တဲ့ အသံေတြျဖစ္ေနပါရဲ႕လား။ သင္ေျပာခ်င္ေနတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးေရာ ဟုတ္ပါရဲ႕လား ဆိုတာကို ျပန္ ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ပါ။
အဲဒီလို အသံသြင္းထားတာေတြကို ျပန္နားေထာင္လိုက္ ေနာက္ထပ္ႀကိဳးစားၿပီး ျပန္ေျပာလိုက္ လုပ္ၾကည့္ပါ။ အသံသြင္းၿပီးေလ့က်င့္တဲ့ ေလ့က်င့္ခန္းဟာ သင့္ရဲ႕ အသံေန အသံထားကို အမွန္ကန္ဆံုးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပါ။ သင္ရဲ႕ တိုးတက္လာမႈေတြကိုလည္း အလြယ္ကူဆံုး ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပါ။
အိမ္မွာေနရင္း သင့္ရဲ႕ အသံအေနအထားကို အေကာင္းဆံုးတိုးတက္ေအာင္ေလ့က်င့္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
အသံအနိမ့္အျမင့္ သင္ခန္းစာေတြအတြက္ စာအုပ္ေတြ အမ်ားအျပားရွိပါတယ္။ အြန္လိုင္းမွာလဲ ပိုမိုတိက်မွန္ကန္ၿပီး စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း နမူနာေတြရွိပါတယ္။ စတင္ေလ့လာဖို႕ အေကာင္းဆံုးေနရာကေတာ့ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီက ထုတ္လႊင့္တဲ့ သင္ခန္းစာေတြပါပဲ။ ဒီသင္ခန္းစာေတြမွာ အမ်ိဳးအစားေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာမို႔ ပိုမို ေလ့လာခ်င္သူေတြ အတြက္ ကိုယ္စိတ္၀င္းစားတဲ့ အပိုင္းကို ေရြးခ်ယ္ ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။
YouTube လို႔ေခၚတဲ့ ဆိုရွယ္ မီဒီယာတစ္ခုကလဲ ေနာက္ထပ္ေလ့လာစရာ ေနရာတစ္ခုပါပဲ။ သင္ႏွစ္သက္တဲ့ ရုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြက ဇာတ္ေကာင္စရိုက္ေတြနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးေတြကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ရွာေဖြၾကည့္လိုက္ပါ။ စိတ္ပင္ပန္းစရာ ကိစၥေတြမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အေရးႀကီး ေခါင္းစဥ္ေတြကို ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရီစရာေမးခြန္းေတြကို အေမးခံရတဲ့ အခါမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လိုတုန္႔ျပန္တယ္ ဆိုတာကို နားေထာင္ၿပီး ေလ့လာလို႔ရပါတယ္။ ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေခါင္းစဥ္ကို မူတည္ၿပီး အသံေနအသံထား ေျပာင္းလဲပံုေတြကိုလည္း ေတြ႕ရမွာပါ။
အသံေနအသံထားကို မွန္ကန္စြာနဲ႔ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေလ့က်င့္ပါ။
အသံထြက္ မွန္ကန္ဖို႔အတြက္ အသံအနိမ့္အျမင့္မွန္ကန္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို တို႔ေတြသိထားခဲ့သလို အႀကိမ္မ်ားမ်ားမွာ အသံထြက္ကို မွန္ေအာင္ေျပာႏိုင္ဖို႔လဲ အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို သိဖို႔လိုပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ အသံထြက္ အနိမ့္အျမင့္က စက္ရုပ္လို အသက္၀င္မႈကင္းမဲ့ေနမယ္၊ ပထမဦးဆံုး ေတြခဲ့တဲ့ အငွားကားေမာင္းသူလို ျဖစ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္ဟာ ပ်က္ဆီးသြားႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဂၤလိပ္လို အသံထြက္မွန္မွန္နဲ႔ ယံုၾကည္မႈရွိရွိေျပာခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူမ်ားေတြ ဘယ္လိုေျပာတယ္ဆိုတာကို နားေထာင္ပါ။ အတုယူၿပီးလိုက္ေျပာပါ။ ကိုယ္ေျပာေနတဲ့ အသံကို အသံသြင္းထားၿပီး ျပန္နားေထာင္ပါ။ ဒီလိုဆိုရင္ေတာ့ အဂၤလိပ္စကားကို အသံထြက္မွန္မွန္နဲ႔ ယံုၾကည္ခ်က္ရွိစြာ ေျပာႏိုင္လာမွာပါ။
Britishcouncil.org/blog မွ Fazle Muniem ၏ How English learners can improve intonation ကို ကိုးကားဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
အသံအနိမ့်အမြင့် ဆိုတာဘာလဲ၊ သင့်ရဲ့ အသံထွက်နဲ့ အသံနေအသံထား အနိမ့်အမြင့်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ ဘင်္ဂလားဒေရ့ှ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဖေဇယ်လ်မျူနီယမ် က အသံအနိမ့်အမြင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သင်ဟာ အငှားကားမောင်းသူတစ်ယောက်ကို ၅ကီလိုမီတာ အကွာမှာရှိတဲ့ ဈေး၀ယ်စင်တာတစ်ခုကို လိုက်ပို့ပေးနိုင်မလားလို့ မေးနေတယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ ကားမောင်းသူကလဲ သင့်ကို စိတ်မပါတဲ့အသံနဲ့ "ရတယ်။ တက်ပါ " စသည်ဖြင့် ပြန်ပြောတယ်ဆိုပါစို့။ သင် သူ့ကားပေါ်ကို တက်လိုက်သွားမှာပါလား။
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ပထမကားရဲ့ နောက်မှာ နောက်ထပ်ကားတစ်စီး ရှိတယ်နေပြီး၊ သင်ကလည်း အလားတူမေးခွန်းမျိုးမေးခဲ့ပြီး၊ အဲ့ဒီ ကားမောင်းသူကလည်း သင့်ကို တေးဂီတ အသံကဲ့သို့ ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာနဲ့ ပြန်ပြီးတုန့်ပြန်ပြောဆိုတယ် ဆိုပါစို့။ သင် သူ့ကားနဲ့ လိုက်သွားမှာပါလား။
သင် ဒုတိယကားကို ရွေးချယ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင်၊ ဒါဟာ ကားမောင်းသူရဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆိုလိုက်တဲ့ အသံနေအသံထားကို ကြည့်ပြီး သင်ရွေးချယ်လိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသံက သင့်ကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး သင့်ကို နွေးနွေးထွေးထွေး ကြိုဆိုတယ်လို့ သင်ခံစားသွားရလို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကဲဒါဖြင့် အသံနေအသံထား၊ အသံ အနိမ့်အမြင့် ဆိုတာ အမှန်က ဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ။ ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့ပုံစံမျိုး ပြောဆိုတာလား၊ အဲ့ဒီထက်ပိုသေးလား။
အသံအနိမ့်အမြင့်ကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်မလဲ
အသံအနိမ့်အမြင့်ဆိုတာ ဘာသာစကားအားလုံရဲ့ အသံထွက်ပုံထွက်နည်းပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပုံစံတွေကတော့ အသံဖိ (stress)၊ စီးဝါးညီတဲ့အသံ (rhythm)၊ တဆက်တည်း ထွက်သောအသံ (connected speech)၊ အသံထွက်ပုံ (accent) တို့ပါ၀င်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသံနေအသံထား အသံအနိမ့်အမြင့်ဆိုတာဟာ ဘာကိုပြောမယ်ဆိုတာထက်၊ ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရမယ်ဆိုလျှင်ဖြင့် အသံအနိမ့်အမြင့် ဆိုတာဟာ "သံစဉ်ကျတဲ့စကားသံ"လို့ ပြောလို့တောင်ရပါတယ်။ အဲဒီစကားသံတွေမှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ သံစဉ်တွေဟာ ကွန်မတို့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်နဲ့ ပြောတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ်ကို သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသံအနိမ့်အမြင့်ဟာ ကျွန်မတို့ပြောချင်နေတဲ့ စကားလုံးတွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ဖော်ပြနေတယ်လို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်အသံထွက် အနိမ့်အမြင့်ရဲ့ မတူညီသော လုပ်ဆောင်မှုများ
အသံအနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်၊ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သီအိုရီအချို့ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက အချက်နှစ်ခုကို ရှာဖွေလေ့လာ ကြည့်ကြရအောင်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားတွေ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာဆိုရင် နားထောင်သူက စကားပြောနေသူရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ငြီးငွေ့နေတာလား၊ စိတ်၀င်စား တာလား၊ အံံ့အားသင့်နေတာလား၊ ဒေါသထွက်နေတာလား၊ ကျေးဇူးတင်နေတာလား၊ ပျော်ရွှင်နေတာလား စတာတွေကို အသံအနိမ့်အမြင့်ကနေ တဆင့်အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
ဥပမာအနေနဲ့ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ စားပွဲထိုးက သင့်ကို "ချောကလက်မုန့်ကို ကြိုက်ပါသလား" ဆိုပြီးမေးတဲ့ အချိန်မှာ သင်က "အင်း"လို့ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ အသံက အလယ်လောက်မှာ မြင့်တက်သွားပြီး အဆုံးသတ်မှာ အသံကကျသွားမယ် ဆိုလျှင် စားပွဲထိုးလေးက သင့်ကို ပြုံးပြခေါင်းညိတ်ပြီး "ဘာကြောင့်ပါလဲ ခင်ဗျာ" ဆိုပြီး ပြန်မေးပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သင်က အလွန်နားထောင်ကောင်းတဲ့ သံစဉ်ကျတဲ့ စကားသံနဲ့ သင့်ရဲ့နှစ်သက်မှုကို ဖော်ပြလိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာ အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာ သင်မထင်မှတ်ပဲ မွေးနေ့ကိတ်ကို လက်ခံရရှိမယ်ဆိုပါတော့။ "Did you get that for me?" ဆိုပြီး သင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ "me" ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင့်ရဲ့ အသံကို မြှင့်ပြီး ပြောရပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ သင့်ရဲ့ အံ့သြ၀မ်းသာမှုကို ဖော်ပြပေးရာလဲ ရောက်ပါတယ်။
စိတ်ပျက်ညည်းငွေ့လာတဲ့ အခါမျိုးမှာ အသံခပ်နိမ့်နိမ့်နဲ့ တုန့်ပြန်ပြောဆို ရပါတယ်။ သင့်ဆီကို အခွန်ဆောင်ရမယ့် စာရွက်လာပို့တဲ့ စာပို့သမားကို "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်" လို့ ပြန်ပြောတဲ့ အသံနဲ့ သင့်ကား လမ်းဘေးတစ်နေရာမှာ ကားဘီးပေါက်သွားချိန်မှာ လာကူညီပေးတဲ့လူကို ပြောလိုက်တဲ့ "ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"ဆိုတဲ့ စကားသံနှစ်ခု ကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်မတို့ဟာ ကျေးဇူးတင် စကားနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဖော်ပြချင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ စကားလုံးတွေကို တိတိကျကျနဲ့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲရှိတဲ့ အသံအနေအထားတွေနဲ့ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
စကားပြောဆိုရာမှာ အသံနေအသံထားမှန်ကန်ဖို့ အတွက် သဒ္ဒါအသုံးပြုမှုကလည်း မှန်ကန်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ "Wh" နဲ့စတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးတဲ့အခါမှာ အကျသံတွေနဲ့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းအသစ်နဲ့ မိတ်ဖွဲ့ စကားတွေပြောတဲ့ အခါမျိုးမှာ "What's your name?" "Where are you from?" "Why did you choose this school?" "How long will you stay in here?" စတဲ့မေးခွန်းတွေ မေးတဲ့အခါမျိုးမှာ အသံနေအသံထားဟာ အကျသံဖက်ကို ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်။ မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အဖြေလောက်ပဲ လိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုး မေးတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ အသံဟာ အမြင့်သံဖက်ကို ရောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ- စောစောက သူငယ်ချင်းအသစ်နဲ့ မိတ်ဆက်တဲ့ စကားပြောဆိုခြင်း မှာပဲ "Have you studied here before?" "Do you like the teacher?" "Will you come back tomorrow?" စတဲ့ ဟုတ်လား၊ မဟုတ်ဘူးလား၊ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေကို မေးတဲ့အခါမျိုးမှာ သင့်ရဲ့ အသံဟာ အဆုံးသတ်နေရာတွေမှာ မြင့်တက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသံအနိမ့်အမြင့် မှန်ကန်စေမည့် နည်းစနစ်များ
သင့်အသံ အနိမ့် အမြင့်မှန်ကန်ဖို့အတွက် အကောင်းဆုံး လေ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာက အသံအနိမ့် အမြင့်နဲ့ ဆိုင်တာတွေကို ပိုသိအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အသံသွင်းထားတဲ့ စကားပြောဆိုပုံတွေကို သေချာနားထောင် သင့်ပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ YouTube လိုနေရာမျိုးကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဒီလို နားထောင်ပေးခြင်းဖြင့် တခြားသူတွေရဲ့ စကားပြောဆိုပုံ အသံ အနိမ့်အမြင့်ကို သင်ကောင်းကောင်း သိလာမှာပါ။
နောက်ထပ် အကြံပေးလိုတာကတော့ သင့်စကားသံကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်နားထောင်လို့ရအောင် အသံသွင်းထားဖို့ပါပဲ။ ဒီနေ့ကာလတွေမှာ သာမန်စမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင် အသံသွင်းလို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်၀ဲတွေ ပါနေပါပြီ။ အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ မတူတာတွေကို တွေ့ရမှာမို့ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် လုပ်နိုင်တာကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်တွေထဲက စကားလုံးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန်ပြောတာကို အသံသွင်းထားဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြန်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စကားသံတွေက သဘာ၀ကျတဲ့ အသံတွေဖြစ်နေပါရဲ့လား။ သင်ပြောချင်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးရော ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတာကို ပြန် ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အဲဒီလို အသံသွင်းထားတာတွေကို ပြန်နားထောင်လိုက် နောက်ထပ်ကြိုးစားပြီး ပြန်ပြောလိုက် လုပ်ကြည့်ပါ။ အသံသွင်းပြီးလေ့ကျင့်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းဟာ သင့်ရဲ့ အသံနေ အသံထားကို အမှန်ကန်ဆုံးတိုးတက်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။ သင်ရဲ့ တိုးတက်လာမှုတွေကိုလည်း အလွယ်ကူဆုံး ဖော်ပြနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
အိမ်မှာနေရင်း သင့်ရဲ့ အသံအနေအထားကို အကောင်းဆုံးတိုးတက်အောင်လေ့ကျင့်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများ
အသံအနိမ့်အမြင့် သင်ခန်းစာတွေအတွက် စာအုပ်တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာလဲ ပိုမိုတိကျမှန်ကန်ပြီး စိတ်၀င်စားစရာကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း နမူနာတွေရှိပါတယ်။ စတင်လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ ဗြိတိသျှကောင်စီက ထုတ်လွှင့်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေပါပဲ။ ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိတာမို့ ပိုမို လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် ကိုယ်စိတ်၀င်းစားတဲ့ အပိုင်းကို ရွေးချယ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
YouTube လို့ခေါ်တဲ့ ဆိုရှယ် မီဒီယာတစ်ခုကလဲ နောက်ထပ်လေ့လာစရာ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ သင်နှစ်သက်တဲ့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ဇာတ်ကောင်စရိုက်တွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ ရှာဖွေကြည့်လိုက်ပါ။ စိတ်ပင်ပန်းစရာ ကိစ္စတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အရေးကြီး ခေါင်းစဉ်တွေကို ဆွေးနွေးတဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရီစရာမေးခွန်းတွေကို အမေးခံရတဲ့ အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်လိုတုန့်ပြန်တယ် ဆိုတာကို နားထောင်ပြီး လေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဆွေးနွေးကြတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို မူတည်ပြီး အသံနေအသံထား ပြောင်းလဲပုံတွေကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
အသံနေအသံထားကို မှန်ကန်စွာနဲ့ အချိန်များများလေ့ကျင့်ပါ။
အသံထွက် မှန်ကန်ဖို့အတွက် အသံအနိမ့်အမြင့်မှန်ကန်ဖို့ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို တို့တွေသိထားခဲ့သလို အကြိမ်များများမှာ အသံထွက်ကို မှန်အောင်ပြောနိုင်ဖို့လဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အသံထွက် အနိမ့်အမြင့်က စက်ရုပ်လို အသက်၀င်မှုကင်းမဲ့နေမယ်၊ ပထမဦးဆုံး တွေခဲ့တဲ့ အငှားကားမောင်းသူလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ဟာ ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူများတွေ ဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာကို နားထောင်ပါ။ အတုယူပြီးလိုက်ပြောပါ။ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ အသံကို အသံသွင်းထားပြီး ပြန်နားထောင်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိစွာ ပြောနိုင်လာမှာပါ။
Britishcouncil.org/blog မှ Fazle Muniem ၏ How English learners can improve intonation ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
<Unicode> အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသူများ အသံအနိမ့်အမြင့် မှန်ကန်တိုးတက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အသံအနိမ့်အမြင့် ဆိုတာဘာလဲ၊ သင့်ရဲ့ အသံထွက်နဲ့ အသံနေအသံထား အနိမ့်အမြင့်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်အောင် လုပ်မလဲဆိုတာကို သိပါသလား။ ဘင်္ဂလားဒေရှ့်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ဗြိတိသျှကောင်စီမှ ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ဖေဇယ်လ်မျူနီယမ် က အသံအနိမ့်အမြင့်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ အခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
သင်ဟာ အငှားကားမောင်းသူတစ်ယောက်ကို ၅ကီလိုမီတာ အကွာမှာရှိတဲ့ စျေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကို လိုက်ပို့ပေးနိုင်မလားလို့ မေးနေတယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်လိုက်ပါ။ ကားမောင်းသူကလဲ သင့်ကို စိတ်မပါတဲ့အသံနဲ့ "ရတယ်။ တက်ပါ " စသည်ဖြင့် ပြန်ပြောတယ်ဆိုပါစို့။ သင် သူ့ကားပေါ်ကို တက်လိုက်သွားမှာပါလား။
အသံအနိမ့်အမြင့်ဆိုတာ ဘာသာစကားအားလုံရဲ့ အသံထွက်ပုံထွက်နည်းပုံစံပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် ပုံစံတွေကတော့ အသံဖိ (stress)၊ စီးဝါးညီတဲ့အသံ (rhythm)၊ တဆက်တည်း ထွက်သောအသံ (connected speech)၊ အသံထွက်ပုံ (accent) တို့ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသံနေအသံထား အသံအနိမ့်အမြင့်ဆိုတာဟာ ဘာကိုပြောမယ်ဆိုတာထက်၊ ဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ဘာသာစကားတွေ၊ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာဆိုရင် နားထောင်သူက စကားပြောနေသူရဲ့ စိတ်နေသဘောထားကို ခန့်မှန်းနိုင်ဖို့ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ငြီးငွေ့နေတာလား၊ စိတ်ဝင်စား တာလား၊ အံံ့အားသင့်နေတာလား၊ ဒေါသထွက်နေတာလား၊ ကျေးဇူးတင်နေတာလား၊ ပျော်ရွှင်နေတာလား စတာတွေကို အသံအနိမ့်အမြင့်ကနေ တဆင့်အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ဥပမာ အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ သင်ရဲ့အလုပ်ထဲမှာ သင်မထင်မှတ်ပဲ မွေးနေ့ကိတ်ကို လက်ခံရရှိမယ်ဆိုပါတော့။ "Did you get that for me?" ဆိုပြီး သင်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာ "me" ဆိုတဲ့နေရာမှာ သင့်ရဲ့ အသံကို မြှင့်ပြီး ပြောရပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ သင့်ရဲ့ အံ့သြဝမ်းသာမှုကို ဖော်ပြပေးရာလဲ ရောက်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အကြံပေးလိုတာကတော့ သင့်စကားသံကို သင်ကိုယ်တိုင်ပြန်နားထောင်လို့ရအောင် အသံသွင်းထားဖို့ပါပဲ။ ဒီနေ့ကာလတွေမှာ သာမန်စမတ်ဖုန်းတွေမှာတောင် အသံသွင်းလို့ရတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ ပါနေပါပြီ။ အဲဒီလိုလုပ်တာဟာ ကိုယ်မျှော်လင့်ထားတာနဲ့ မတူတာတွေကို တွေ့ရမှာမို့ တကယ့်ကို စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းပါတယ်။ နောက်ထပ် လုပ်နိုင်တာကတော့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက စကားလုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် စာအုပ်တွေထဲက စကားလုံးတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ် အပြန်အလှန်ပြောတာကို အသံသွင်းထားဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်ပြောခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ပြန်နားထောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာ ကိုယ့်စကားသံတွေက သဘာဝကျတဲ့ အသံတွေဖြစ်နေပါရဲ့လား။ သင်ပြောချင်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးရော ဟုတ်ပါရဲ့လား ဆိုတာကို ပြန် ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ပါ။
အသံအနိမ့်အမြင့် သင်ခန်းစာတွေအတွက် စာအုပ်တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာလဲ ပိုမိုတိကျမှန်ကန်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း နမူနာတွေရှိပါတယ်။ စတင်လေ့လာဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာကတော့ ဗြိတိသျှကောင်စီက ထုတ်လွှင့်တဲ့ သင်ခန်းစာတွေပါပဲ။ ဒီသင်ခန်းစာတွေမှာ အမျိုးအစားတွေ အများကြီးရှိတာမို့ ပိုမို လေ့လာချင်သူတွေ အတွက် ကိုယ်စိတ်ဝင်းစားတဲ့ အပိုင်းကို ရွေးချယ် လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
အသံထွက် မှန်ကန်ဖို့အတွက် အသံအနိမ့်အမြင့်မှန်ကန်ဖို့ဟာ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို တို့တွေသိထားခဲ့သလို အကြိမ်များများမှာ အသံထွက်ကို မှန်အောင်ပြောနိုင်ဖို့လဲ အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကို သိဖို့လိုပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အသံထွက် အနိမ့်အမြင့်က စက်ရုပ်လို အသက်ဝင်မှုကင်းမဲ့နေမယ်၊ ပထမဦးဆုံး တွေခဲ့တဲ့ အငှားကားမောင်းသူလို ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနယ်ပယ်ဟာ ပျက်ဆီးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ယုံကြည်မှုရှိရှိပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သူများတွေ ဘယ်လိုပြောတယ်ဆိုတာကို နားထောင်ပါ။ အတုယူပြီးလိုက်ပြောပါ။ ကိုယ်ပြောနေတဲ့ အသံကို အသံသွင်းထားပြီး ပြန်နားထောင်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အင်္ဂလိပ်စကားကို အသံထွက်မှန်မှန်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ရှိစွာ ပြောနိုင်လာမှာပါ။
Permalink Reply by ミインチヨ on July 17, 2015 at 20:18
Permalink Reply by Aung Moe on July 17, 2015 at 21:53
Permalink Reply by Aung Win Naing on July 18, 2015 at 9:35
Permalink Reply by Chit Yee Hsu Thant on July 18, 2015 at 9:50
Permalink Reply by myinthlaing on July 18, 2015 at 14:14
Permalink Reply by Thein Htet Oo on July 19, 2015 at 14:28
Permalink Reply by Młn Khanț Kø Kø on July 19, 2015 at 20:10
Permalink Reply by Aung ko ko oo on July 20, 2015 at 9:21
Permalink Reply by San Dar Lin on July 20, 2015 at 17:58
Permalink Reply by မင္း မင္း on July 21, 2015 at 10:20
Permalink Reply by Soe Paing Paing Tun on July 21, 2015 at 22:50
Permalink Reply by thinkhaingsoe on July 23, 2015 at 6:11